UTM waxay isku duweysaa khariidadaha google - Geofumadas
Mee, 2011 Cartografia, Featured, Google Earth / Maps, tabo cusub
Google waxa laga yaabaa inuu yahay qalab aan ku noolnno ku dhawaad ​​usbuuciiba, ma aha in laga fikiro maalin kasta. Inkasta oo codsiga si ballaaran loo isticmaalo si uu u socdo oo u socdo jihooyinka, ma fududa in la barbardhigo isuduwayaasha meel gaar ah, ama qaabka juqraafi, iskudhaf yar UTM ee khariidadaha google
Maqaalkani, marka laga reebo muujinta sida loo sawirayo isku-duwayaasha Khariidadaha Google, wuxuu ku barayaa inaad ku noqoto khabiir inaad ku muujiso isku-duwayaashaas Excel-ka, u beddelaan UTM iyo xitaa ku dhejiyaan AutoCAD.
Utm ayaa isku duwaya khariidadaha google
Shaxda hore, muuqaalka Khariidadaha Google ayaa u muuqda, iyada oo xulashooyinka lagama maarmaanka ah si loo helo boos. Waxaad geli kartaa cinwaanka cinwaan gaar ah, ama magaca magaalo, ama adigoo raadinaya liiska ku yaal bandhigga midigta sare.
Marka la doorto, khariidadu waxay ku taalaa cinwaanka la xushay.
Waxaan ku dhejin karnaa meel kasta oo khariidada ka mid ah, waxaanan muujineynaa isku-duwaha jaantuska tobanle iyo sidoo kale galmo (darajo, daqiiqo iyo ilbiriqsiyo).
Sida aad u arki karto, jajab tobanle waxay xoojisaa 19.4326077, -99.133208. Waxaa loola jeedaa 19 in uu ka sarreeyo qorraxda iyo 99 ee ka soo jeeda Greenwich, oo ku taal galbeedka, taasina waa sababta ay u xun tahay. Sidoo kale, isku-duwidda juqraafi waxay u dhigantaa xuddunta 19º 25 '57.39 "N, dherer 99º 7' 59.55" W. Qeybta kore waxay muujineysaa Isku duwaha UTM X = 486,016.49 Y = 2,148,701.07 oo u dhiganta 14 aagga waqooyiga dhexe.
Diyaarso Taas waxaad ku baratay inaad ku hesho barta Map-ka oo aad taqaanid isku-duwaha UTM.
Sidee loo kaydiyaa isku-duwayaasha dhowr ah ee Khariidadaha Google.
Markii hore, waxaa la sharaxay sida loo arko qodobo shakhsiyeed, labadaba joornaalka juqraafi iyo isuduwidda Universal Traverso de Mercator (UTM).
Haddii aan rabno inaan dhowr dhibcood ku kaydinno Khariidadaha Google oo aan ku sawirno feylka Excel, waa in aan raacnaa habraacan.
Waxaan galnaa Khariidadaha Google, xisaabtana Gmail.
Qeybta bidix waxaan ku dooranaa "Meelahaada" xulashada Halkan waxaan ku arki doonaa qodobbada aan calaamadeysannay, dariiqyada ama khariidadaha aan keydinnay.
Qeybtaan waxaan dooranaa "Khariidadaha" ikhtiyaarka waxaanan abuurnaa khariidad cusub.
Sida aad arki karto, halkan waxaa ku yaal shaqooyin dhowr ah si loo abuuro lakabyo. Xaaladdan, waxaan abuuray qodobbada 6 ee geesaha iyo sidoo kale garbaha. Inkasta oo shaqeyntu ay fudud tahay, waxay u oggolaataa in ay bedesho midabka, qaabka barta, sharaxaadda shayga iyo xitaa ku dar sawir ah vertex kasta.
Marka aad u guurto meesha aad daneyneyso oo aad sawirato lakabyada aad u malaynayso inay muhiim tahay. Waxay noqon kartaa lakab loogu talagalay geesaha, lakabka kale ee geesaha dhulka iyo lakabka kale ee dhismayaasha, haddii aad doonayso inaad soo qaadato.
Marka la dhammeeyo, si aad u soo dejiso, dooro saddex dhibcood oo qumman oo ka dhig sida faylka kml / kmz, sida ku cad muuqaalka soo socda.
Faylasha kml iyo kmz waa Khariidadaha Google iyo qaababka Google Earth kuwaas oo iskudhafyada, wadooyinka iyo garaannada lagu kaydiyo.
Diyaarso Waxaad bartay sida loo keydsado dhibcooyinka kala duwan ee Google Khariidadaha iyo u soo dhig sida faylka kmz. Halkan waxaa ah sida loo eego isku-duwani ku qoran Excel.
Sida loo eego Isku-duwaha Khariidadaha Google ee Excel
Kmz waa gundhig ah faylasha compressed kml. Sidaa daraadeed, habka ugu sahlan ee looga fekerayo waa sidii aan ku heli laheyn faylka .zip / .rar.
Sida lagu muujiyay garaafkan soo socda, waxay noqon kartaa in aynaan arkin faylka kordhinta. Taas awgeed, waa in aan sameynaa talaabooyinka soo socda:
Ikhtiyaarka si aad u aragto kordhinta faylka waa la shaqeynayaa, laga bilaabo "View" tab ee biraawsarka biraawsarka.
Kordhinta laga bilaabo .kmz ilaa .zip ayaa isbeddelay. Si arrintan loo sameeyo, riix jilcan ayaa lagu sameeyaa faylka, iyo xogta ka dambeysa kaddib marka la baddalo. Waan aqbaleynaa farriinta soo socota, taas oo muujinaysa inaanu bedeleyno faylka faylka iyo in ay noqon karto mid aan la isticmaali karin.
Faylka waa la goostay Badhanka midigta, iyo "Soo jiidashada ..." ayaa la xushay. Xaaladdayada jirta, faylka waxaa loo yaqaan «Geofumadas Classroom Ground».
Kml waa qaabab ay ku caan baxaan Google Earth / Khariidadaha, oo horey u ahaa shirkadda Keyhole, markaa magaca (Keyhole Markup Language), sidaa daraadeed, waa faylka qaabka XML (Luqad Tijaabin leh). Sidaa darteed, isagoo faylka XML ah waa inuu awood u leeyahay in laga eego Excel:
2 Waxaan feylka ka fureynaa Excel. In aan kiiska, waxaan la isticmaalayo Excel ii 2015 fariin haddii aad rabto inaad aragto sida miiska XML ah sida buug akhriyo-keliya ama haddii aan doonayo in la isticmaalo guddi isha XML ah. Waxaan dooran karaa doorashada koowaad.
Voila, hadda waxaan leenahay faylka isku-xireyaasha Khariidadaha Google, miiska Excel. Xaaladdan oo kale, laga bilaabo isku xigta 12, oo ku yaalla jaantuska U magacyada odhaahyada muuqda, tiirarka V ee sharaxaada iyo xuduudaha / xajmiga xudunta X.
Sidaa darteed, adigoo koobiyeynaya X-tiir iyo Xadhigga AH, waxaad leedahay walxaha iyo isku-duubnaanta dhibcaha Google Maps.
Isku-dubarid isku-duwayaasha ka ah Khariiradaha Google ilaa UTM.
Sida aad arki karto, waxaa jira koobiyo isku-duwayaasha kor ku xusan. Sidaas darteed, aad qabto X u, wadataa Y iyo zone UTM xusaa column cagaaran, kaas oo tusaalahan u muuqataa in meesha 16 ah.
Kudar isku darka Khariidadaha Google u soo dir AutoCAD.
Si aad u awooddo inaad u dirto xogta loo yaqaan "AutoCAD", waxaad u baahan tahay inaad kiciso amarrada qodobbada badan. Tani waxay ku jirtaa "Sawir", sida ku cad shaxanka dhinaca midigta.
Taas awgeed, isuduwahaaga ayaa lagaa qaaday. Si aad u aragto, Dhamaan / Dhamaan waa la sameyn karaa.
Waxaad iibsan kartaa template oo leh Paypal ama credit card. Qaadashada shaashadda waxay ku siinaysaa xaqa aad u leedahay taageerida boostada, haddii ay dhacdo inaad dhibaato ka haysato template.
Post Previous«Previous Google Chrome 30 bilood ka dib
Post Next Earth Google; mappers taageerada aragguNext »
11 jawaabta "UTM waxay isku duweysaa khariidadaha google"
WAXAA LAGU DHACAY isagu wuxuu leeyahay:
xajin sida loo beddelo cinwaanada isku-duwayaasha
HELLO WAXAAN U BAAHAN YAHAY CINWAAN CIIDAMADA UTM COORD COUNTRIES, LENGTH AND LATITUDE, HIKO HAA
Waxaan ubaahanahay inaan codsigeyga u adeegsado telefankayga anigoo mahadnaqaya
Petra isagu wuxuu leeyahay:
Anigu waan fahamsanahay laakiin ma sharxi karo Espanyol:
Khariidadaha Google waxay ubaahan yihiin isuduwayaasha qaabka jajab tobanle sidaas daraadeed waa inaad u bedeshaa isku-duwaha UTM si aad u muujiso.
U diyaari isku-duwaha UTM ee boggeyga internetka - http://www.hamstermap.com oo waxaad tagi kartaa khariidadaha google si aad u muujiso.
Haddii kale, haddii aad leedahay meelo badan oo aad ku muujiso, waxaad ku dari kartaa Khariidadaha Google adigoo isticmaalaya qalab QUAPK MAP isla goobta.
ninka ayaa usha
Maxaa dhacaya waa in aysan ahayn codsi Google, inkastoo loo soo saaray Chrome.
Oo waxaan qabaa in Google sidoo kale ka baxayo waxyaabaha aasaasiga ah ee shirkadaha kale si ay uga faa'iidaystaan ​​oo ay u horumariyaan ...
Gedespro isagu wuxuu leeyahay:
Tremendo barnaamijka yar, waxaan hadda ku rakibi doonaa. Waxa aanan fahmin waa sidee sida loogu adeegsan karo sida caadiga ah ee dhammaan daalacashada, iyada oo aan loo eegin chrome ka yimid Google, waxay sahlaysaa isticmaalka khariidadaha Google ee dhammaan meeraha.
LUIS DE LA CRUZ isagu wuxuu leeyahay:
Aad u wanaagsan oo aad u wanaagsan ... ..thank for tabarruca uu ... AAN A xaaladood AMPLIO..AHORA DHEERAAD AH
Michigan ayaa isagu wuxuu leeyahay:
Tani waa wanaagsan soo bixi lahaa software ah oo lacag la'aan ah, ii sheeg sida ay ula dhan referncias kuwa shaqeeyaan, waa mid aad u faa'iido badan ee u kacda qaab dhismeedka soohdimahooda lagoons aad u xiran by mangroves iyo ii ah shaqada kooxda iyo eh isticmaalo wadnaha google iyo waa mid aad u kala duwan tani waa dheeraad ah complete.
Agrim Antonio P. Rodriguez isagu wuxuu leeyahay:
Waxaa jira had iyo jeer maqaallo cajab ah oo ay soo saartay geofumadas, aad u xiiso badan, u sii wad.